Tag: atiny hita maso | Martech Zone
Tag: atiny hita maso
Rentsika rehetra fa sarin-teny iray alina ny sary iray. Mety tsy ho marina izany ankehitriny satria isika mahita ny iray amin'ireo fikomiana amin'ny fifandraisana mampientam-po indrindra tamin'ny vanim-potoana rehetra - sary iray izay anohizan'ny sary ny teny. Ny salanisan'ny olona dia tsy mahatadidy afa-tsy ny 20% amin'ny zavatra novakiany fa ny 80% amin'izay hitany. Ny 90% -n'ny fampahalalana ampitaina amin'ny ati-dohantsika dia hita maso. Izany no nahatonga ny atiny hita maso ho fomba tokana manan-danja indrindra
Ity famoahana ity sy ny ankamaroan'ny asa ataonay ho an'ny mpanjifa dia misy atiny hita maso. Mety… ny mpihaino anay dia nitombo tamin'ny fifantohana tamin'ny atiny maso ary nanampy ny mpanjifanay hitombo ny fahafahan'izy ireo amin'ny atiny hita maso ao anatin'ny fifangaroana. Ity dia sary iray noforonin'ny Market Domination Media hanehoana ny herin'ny atiny hita maso. Tsy tsiambaratelo ny famalian'ny mpanjifa tsara kokoa ny varotra maso, ary izany no izy
Alahady, Jona 22, 2014 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Douglas Karr
Tsy manohitra mihitsy ny dokam-barotra sy ny fandoavana ny fampiroboroboana aho, saingy tompona orinasa maro ary na ny mpivarotra sasany aza tsy manavaka ny mahasamihafa azy. Matetika, ny marketing ara-tsosialy dia hita ho fantsona iray hafa fotsiny. Na dia paikady fanampiny hanampiana ny varotrao aza izy io, ny fiaraha-monina dia manome fotoana hafa tsy mitovy. Ny media sosialy dia nanelingelina ny tontolon'ny dokam-barotra nanomboka tamin'ny fotoana nipoahany tampoka ary nanolotra metatra azo zahana izay nofinofisin'ireo mpivarotra fotsiny. Miaraka amin'ny